Iincwadi ezi-8 zobusika nobusika, elona xesha lifanelekileyo lokufunda | Uncwadi lwangoku
UMariola Diaz-Cano Arevalo | | Iincwadi, Iincwadi zoLutsha, Inoveli, Inoveli emnyama
Ubusika buyeza. Abo kuthi bathanda ukubanda, ikhephu kunye nomkhenkce banethamsanqa. Ndingonwaba ngakumbi ukuba ubusika buhlala unyaka wonke, kodwa kuba kungenjalo, ndiza kuhlala ndikonwabela ngcono. Ukongeza, ibeka enye yezona ndawo zibalaseleyo zokufunda. Isofa eso, loo ngubo, ikofu eshushu okanye itshokholethi, kunye nencwadi emnandi. Yintoni enye ongayicela?
Kulungile ziye apho Izindululo ezi-8 ezahlukeneyo kubaphulaphuli abaninzi. Ukusuka kuncwadi lwabantwana ukuya kwiiklasikhi zakudala ngokuthandana, inoveli okanye iinoveli zedrama. Inyani yile yokuba banobusika kwizihloko zabo. Masibone.
1 Incwadi yasebusika -iRotraut uSusanne Berner
2 Isibini esitshatileyo sasebusika-uChristelle Dabos
3 Ngaphandle kobusika-Isabel Allende
4 Ubusika ebusweni bakho - uCarla Montero
5 I-Sirens zasebusika-uBarbara J. Zitwer
6 Ibali lobusika-UMark Helprin
7 Abantwana bakaBusika- uGilbert Bordes
8 Ibali lobusika - uWilliam Shakespeare
Incwadi yasebusika -I-Rotraut uSusanne Berner
De 2004, esi sihloko Amaphepha ayi-20 kujoliswe kuyo abafundi abancinci ukuya kwiminyaka emi-5. Umbhali wayo wazalwa ngo Stuttgart nanjengomyili wemizobo owafumana ngo-1984 ibhaso laseJamani labantwana neloLutsha.
Uyilelwe kwi ubunyani bomlingo, kule ncwadi sihamba kwisixeko esijikelezileyo. Ngaxeshanye, silandela izinto ezincinci ezenzeka ebantwini nakwizilwanyana ngosuku lobusika. NjengoAndrea, ophosa ibhasi kwakhona, okanye isikhwenene sikaLena esiya kuhambo. Nangona imfihlakalo iya kubonelelwa ngengxowa ebomvu ebomvu engenamnini.
Umyeni nomyeni ebusika -UChristelle Dabos
UDabos ngumbhali ongumFrentshi kwaye kunjalo Incwadi yakhe yokuqala yesaga emnandi egcwele intelekelelo. Ophelia, umlinganiswa ophambili onxibe isikhafu esidala kwaye uneiglasi zemiyopiya, tUnamandla akhethekileyo: unokufunda izinto ezidlulileyo kwaye ahambe kwizipili.
Hlala ngokuzolileyo kwiTyeya ka-Anima emva koko Uganana noLwamvila, Yintsapho enamandla yeDragons. Intombazana kufuneka ishiye usapho lwayo kwaye imlandele ukuya eCitacielo, ikomkhulu le-Pole. Kodwa u-Ophélie akasazi isizathu sokuba akhethwe okanye kutheni kufuneka azifihle ukuba ungubani.
Ngaphaya kobusika -UIsabel Allende
Umbhali owaziwayo udibanisa kule noveli a Umfazi waseChile, intombazana engekho mthethweni yaseGuatemala kunye nomMelika oqolileyo, osindayo kwisaqhwithi esothusayo ukuwa ngaphezulu kweNew York kwabafileyo ebusika. Baya kugqiba bafunde ukuba ngaphaya kwelo busika kukho indawo yothando olungalindelekanga. Inye ye amabali ongezelelweyo de Allende apho ubunyani bokufuduka kunye nobunikazi baseMelika namhlanje ngabo balinganiswa abafumana ithemba eluthandweni nakwithuba lesibini.
Ubusika ebusweni bakho - UCarla Montero
Ithunyelwe kwi 2016, yinoveli yamva nje yombhali waseMadrid Icwecwe le-Emerald Kwaye kuphakathi i-adventure, uthando kunye nemfazwe kwisiqingatha sokuqala senkulungwane yama-XNUMX.
Utata wesibini ULena noGuillén bahlala cwaka kwilali esezintabeni. Zombini zisondele kakhulu kodwa isiganeko esingalindelekanga nesingaqhelekanga sinyanzela ukuba bohlukane. Ukutyhubela iminyaka kunye nomgama, obu bunzima bujika bube luthando lolutsha olunikwa kukudibana okungacacanga kunye nekhulu leeleta.
Imfazwe yamakhaya iyamangalisa uLena eOviedo naseGuillén eFrance. Ukukhathazwa yimeko yakhe, uya kwenza uhambo olunobungozi kwilizwe elinomngcipheko wokudibana naye. Kodwa imfazwe inelinye ikamva elilungiselelwe bona kuba uLena ngumongikazi wokuvolontiya wecala labavukeli kwaye uyachasa kwisixeko esingqongwe yimikhosi yeRiphabhlikhi apho kufika uGuillén, oyinxalenye yemikhosi erhangqe isixeko. Y iimeko zakhe ziya kuphindwa kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi.
Iimpawu ezilungileyo zobusika - UBarbara J. Zitwer
UZitwer iarhente yoncwadi, umvelisi wefilimu kunye nombhali wesikriniukuya. Yi le inoveli yakhe yokuqala kwaye ujikeleze UJoey rubin, umyili wezakhiwo oselula kunye nomhlobisi ohlala eNew York. Ukuba likhoboka kwakhe emsebenzini kuye kwamsusa kubuhlobo bakhe bakudala kwaye uziva esondele kakhulu kwinja yakhe uTink. Kodwa Xa uJoey esiya emaphandleni amaNgesi eyokujonga ukulungiswa kwendlu endala apho uJM Barrie ngokwakhe wabhala uPeter Pan, ubomi bakhe buza kutshintsha..
Kuloo dolophu encinci yesiNgesi udibana namantombazana avela Iqela le-JM Barrie labafazi lokuDada, iqela le-octogenarians Abelana ngomnqweno onomdla: Ukuhlamba yonke imihla yonyaka emanzini echibi elikufutshane nedolophu. Zezona ntlanganiso zenyama negazi, ezele ngamabali nobuntu, eziza kunceda uJoey afumane eyona ntsingiselo yobomi.
Ibali lasebusika -Mark Helprin
UHelprin wazalelwa eNew York ngo-1947. Uyintatheli kwaye ungumbhali wezincoko kunye nemisebenzi yamabali abadala kunye nabantwana. Impumelelo yakhe enkulu yangena 1983 ngale noveli esele iyinxalenye yesiko laseMelika laseMelika. Yi ndiyayithanda intsomi ngezinto ezinomlingo, ebekwe ekuqaleni kwenkulungwane yama-XNUMX eNew York
Peter echibini Ulilungu elinemvukelo leqela lezaphuli-mthetho abathi ngenye imini bangene kwindlu yendlu benethemba lokuyifumana ingenanto kwaye befumana ukuphanga okuhle. Kodwa fumanisa Beverly penn, intombi yabanini bendlu, intombazana enobungqingili kunye nengqondo, kodwa wagwetyelwa ukufa ngesiquphe. Aba babini bayathandana kwaye uPetros uzama ukuyeka ixesha ukuze intanda yakhe ingamshiyi. Ukhatshwa lihashe elimhlophe ngubani oza kuba ngumgcini wakho.
Umbhali, umbhali wesikrini kunye nomlawuli UAkiva Goldsman yenziwe uhlengahlengiso kwifilimu ngo-2014 ngempumelelo exubeneyo.
Abantwana basebusika -Gilbert Bordes
Ithunyelwe kwi 2010, Le noveli yalo mbhali ongumFrentshi isethwe kwi ubusika ngo-1943. Isixelela ibali labanye izikhokelo eziye zabanjwa zizama babalekele eSpain abantwana abathandathu bamalungu eNyango. Bazifihlile iimpazamo zabo, kodwa bayala ukubanikezela kwaye babulawa ngama-SS. Nangona kunjalo, abantwana abakaveli. Abaphumezi bagqiba kwelokuba babashiye kwaye batshabalalise ekuphela kwendlela abanokubuyela ngayo. Abantwana abathandathu (abantwana bamaKomanisi, oohlohlesakhe, amaJuda kunye namaKrestu) kuya kufuneka baququzelele, fumana ukutya kunye nomlilo, kwaye woyise iyantlukwano ukuze uphile.
Ibali lasebusika - William Shakespeare
Ungayifundi njani i zakudala zakudala kule mozulu yobusika? Kulungile sigqibile ngale nto umdlalo wezenzo ezintlanu, kwiprose kunye nevesi, kweyona bard yesiNgesi idumileyo ekunokwenzeka ukuba yabhalwa kuyo 1611. Sela kwisiqwenga senoveli IPandosto okanye uloyiso lwexesha nguRobert Greene. Isihloko sibhekisa kuhlobo lwefantasy yohlobo lwesicatshulwa kwaye unayo izinto ezimbi, kodwa ngaphezulu kwayo yonke umdlalo ohlekisayo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Iincwadi ezisi-8 zobusika nobusika, elona xesha lifanelekileyo lokufunda
Ezona ncwadi zifundwa kakhulu ngo-2017 eSpain, eMexico, eArgentina naseColombia